Jamie Carragher oo ka hadlay suurtagalnimada uu Mohamed Salah ugu biiri karo Real Madrid iyo Barcelona – Gool FM
Jamie Carragher oo ka hadlay suurtagalnimada uu Mohamed Salah ugu biiri karo Real Madrid iyo Barcelona
Dajiye March 19, 2021
(Liverpool) 19 Maarso 2021. Ciyaaryahankii hore kooxda Liverpool ee Jamie Carragher ayaa falanqeeyay mustaqbalka labada xiddig ee Mohamed Salah iyo Harry Kane, isagoo carabka ku adkeeyay in fursadaha ay ugu biiri karaan Barcelona ama Real Madrid ay aad u yartahay.
Hadal heynta ku saabsan mustaqbalka Mohamed Salah ee kooxda Liverpool waayadii ugu dambeeyay ayaa si xoogan loo hadal haayay, madaama lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Real Madrid ama Barcelona, si la mid ah isla arintan oo kale waxay quseysaa xiddiga reer England Harry Kane.
Haddaba halyeeyga kooxda Liverpool ee Jamie Carragher oo ka hadlayay mustaqbalka Mohamed Salah iyo Harry Kane, ayaa wuxuu yiri:
“Waxaan u maleynayaa in Mohamed Salah iyo Harry Kane ay sii wadan doonaan kooxaha Liverpool iyo Tottenham Hotspur. iyagu waa gooldhaliyaasha ugu fiican Premier League haatan.”
“Mohamed Salah iyo Harry Kane waxay ku jiraan xilli ciyaareed aysan cidna ku bixin Karin lacag aad u badan labadooda sababa la xiriira da’adooda.”
“Liverpool uma ogolaan doonto Salah inuu baxo isagoo aysan jirin ciyaaryahan kale ee badal u noqon kara, miyuu doonayaa inuu u ciyaaro Paris Saint-Germain? waan la yaabi lahaa haddii uu u dhaqaaqo Horyaalka Faransiiska sidaas darteed waxaan u maleynayaa inuu sii joogi doono Liverpool ugu yaraan xilli ciyaareedka soo socda.”
Halyeey kooxda Juventus ah oo weerar culus ku qaaday Cristiano Ronaldo
DEG DEG: Isku aadka wareegga Siddeeda ee tartanka UEFA Champions League oo la sameeyey